संसारकै ठुलो हिन्दु मन्दिर, तपाई पनि दर्शन गरि सेयर गर्दै जानूहोस यसको महत्व ! मनोकामना पुरा हुन सक्छ - E ALL NEPAL
संसारकै ठुलो हिन्दु मन्दिर, तपाई पनि दर्शन गरि सेयर गर्दै जानूहोस यसको महत्व ! मनोकामना पुरा हुन सक्छ
एजेन्सी । दुनियाकै ठुलो हिन्दु मन्दिर,जसको साउन महिनामा अति नै महत्व छ, हामी तपाई पाठकलाई संसारकै सबैभन्दा ठुलो हिन्दु मन्दिरका बारेमा जानकारी दिँदैछौ । जसको साउन महिनामा अति नै महत्व छ । यो मन्दिर कम्बोडियामा रहेको छ ।
कम्बोडियाको ठुलो क्षेत्रमा फैलिएको यो मन्दिरको निर्माण सम्राट सुर्यवर्मन द्वितीयले आफ्नो शासनकालको इश्बी सम्बत १११२–५३ मा यस मन्दिरको निर्माण गरेका हुन् । यसमा विश्वभरीकै हिन्दु धर्मालम्बीहरु पुग्ने गर्दछन् । साउन महिनामा पुगेर अधिकांशले आफ्ना सामाजीक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने पछिल्लो चलन बनेको छ । तपाईलेपनि सेयर गरे अद्भुत मनोकांक्षा पुरा हुनेछ ।
यो कम्बोडियाको मिकांग नदिको किनारमा रहेको सिमरिप शहरमा छ । सयौ वर्ग माइलमा फैलिएको यस मन्दिर क्षेत्रमा भगवान शिव तथा विष्णु को बिशाल मन्दिरहरु रहेका छन् । यो महिना शिवको महिमा भएकाले अधिक मानिसहरु दर्शन गर्न पुग्दछन् । मन्दिर खमेर वास्तुकला को उच्च परम्परागत शैलीको शिखरमा रहेको छ। कम्बोडियाको राष्ट्रध्वजमा समेत यस मन्दिरको प्रतिकलाई राखिएको छ । अंकोरवाट मन्दिर मेरु पर्वतको प्रतिक समेत मान्ने गरिन्छ । वार्षिक लाखौको संख्यामा पर्यटकले यस मन्दिरको भ्रमण गर्ने गर्दछन । विश्वकै सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटन स्थाल मध्य एक यस मन्दिरलाइ युनेस्कोले बिश्व सम्पदा सुचिमा राखेको छ । दुनियाकै ठुलो हिन्दु मन्दिर,जसको साउन महिनामा अति नै महत्व छ
अन्य समाचार ,त्रिभुवन विश्वविद्यालय हाताभित्र गौरी थामीले जमरा जुसको व्यापार गर्न थालेको करिब दुई वर्ष भयो । यसअघि उनी सोही व्यवसाय सातदोबाटोस्थित घरबाट गर्थिन् । खासै चित्तबुझ्दो व्यापार हुँदैनथ्यो । प्रशस्त हरियाली भएकाले कीर्तिपुरमा मर्निङ वाक गर्न आउनेको संख्या सातदोबाटोभन्दा बढी हुन्छ । त्यस्ता व्यक्ति अचेल जमराको जुस नछुटाई खान्छन् । त्यसै कारण थामीले कीर्तिपुरमा आफ्नो व्यापारको राम्रो बजार भेटेकी छन् ।कीर्तिपुरबाहेक उनी हरिसिद्धिस्थित क्यान्सर अस्पतालनजिकै पनि यो व्यापार गर्छिन् । दुवै ठाउँमा ग्राहकको चहलपहल बाक्लो रहेको उनी बताउँछिन् । त्यसैले नियमित रूपमा जौ र गहुँ रोपी तिनको जुस निकाल्नुलाई उनले दिनचर्या बनाएकी छन् । उनैलाई पछ्याउँदै कीर्तिपुरमा थुप्रैले बिहानीपख जमरा जुसको व्यापार गर्न थालेका छन् ।
कीर्तिपुर मात्र होइन, मर्निङ वाकको बेला अन्य स्थानमा पनि जमरा जुस अत्यधिक बिक्री हुने गरेको छ । थामीकै अनुसार यसमा प्रशस्त क्लोरोफिल हुने हुँदा मानव स्वास्थ्यका लागि लाभकारी छ ।जमराको जुसलाई भिटामिन र मिनरलको पनि राम्रो स्रोत मानिएको छ । प्रोटिनको आधारभूत तत्त्व एमिनो एसिड हो । जमरामा १७ प्रकारका एमिनो एसिड पाइने अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यस्थित हिप्पोक्रेट्स हेल्थ इन्स्टिच्युटका ब्रायन क्लिमेन्ट र आना मेरी क्लिमेन्टले एक अनुसन्धानमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । शरीरमा भएका अनावश्यक रसायन हटाउन जमराको जुसजति प्रभावकारी केही नरहेको जिकिर यिनको छ । मानिसलगायत अन्य जीवको प्रजनन प्रणालीको विकासमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने मान्यता राख्छन् । स्वस्थ तथा चम्किलो छाला चाहने जोकोहीका लागि यो जुस फलदायी सिद्ध हुन सक्ने पनि बताइएको छ ।
कीर्तिपुरका रमण अधिकारी नियमित रूपमा जमराको जुस पिउँछन्, गौरीको जुस स्टलमा । यसका फाइदा–बेफाइदाबारे उनी अनभिज्ञ छन् । तर, अरूले राम्रो हुन्छ भनेका भरमा मर्निङ वाकसँगै जमराको जुस सेवन गर्नु पनि उनको दिनचर्या बनेको छ । सोही स्टलमा जुस पिउन आउने बल्खुकी अस्मिता आचार्य भने निरोगी रहन सेवन गर्दै आएको बताउँछिन् ।आयुर्वेद विशेषज्ञ ऋषिराम कोइराला भन्छन्, “परापूर्वकालदेखि नै जमराको जुस स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ भन्दै प्रयोग गरिन्थ्यो । नेपालमा भने यसको अत्यधिक सेवन हुन थालेको केही वर्ष मात्र भयो ।” शरीरमा घटित हुने अत्यधिक प्रक्रिया अम्लीय (एसिडिक) हुन्छन् । त्यसको मात्रा सन्तुलनमा राख्न अल्काली आवश्यक पर्छ । त्यही अल्काली जमराको जुसबाट प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ । कोइरालाको मान्यता छ, जमराको जुस एउटा राम्रो एन्टी–अक्सिडेन्ट मात्र नभएर रगतका कोषिका बढाउन मद्दत गर्ने तत्त्व पनि हो ।
शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन, रगत शुद्धीकरण गर्न, आन्द्रा सफा गर्न, शरीरबाट आउने दुर्गन्ध कम गर्न र क्यान्सरको निराकरण गर्न क्लोरोफिल अत्यावश्यक छ भनी केही अनुसन्धानले पनि देखाएका छन् । शरीरमा उचित रक्तसञ्चार होस् भनी यो जुस खाने मानिस पनि प्रशस्तै भएको कोइरालाको ठहर छ । तर, उनी स्वीकार्छन्, जमराको जुस कुनै रोगको प्रत्यक्ष औषधोपचार प्रक्रियामा प्रयोग हुन सक्दैन । शरीरका विकार हटाउँदै लैजानमा यसको भूमिका नकार्न नहुने पनि उनको जिकिर छ । जमराको जुसबाट पूर्ण रूपले फाइदा उठाउन स्वस्थकर बीउ र रोगरहित माटो प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छन् । ठिमाहा बीउ प्रयोग गर्दा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने मान्यता उनको छ ।
नियमित रूपमा जमराको जुस सेवन गर्दै आएका मानिसलाई १४ कात्तिकयता वरिष्ठ कलेजो रोग विशेषज्ञ सुधांशु केसीले गरेका केही ट्वीटले आतंकित तुल्याइदिए । सुरुको ट्वीटमा उनले लेखे, ‘जमराको जुसमा केही भिटामिन र मिनरल होला, जसले स्वस्थ रहन मद्दत गर्ला तर यसले रोगलाई निको पार्ने कुरा ठीक होइन । कलेजोका रोग भएका व्यक्तिका लागि त यो प्राणघातक पनि हुन सक्ने रहेछ ।’ त्यसपछिको उनको ट्वीट पनि जमरा जुसकै थियो । लेख्छन्, ‘आज पनि जमरा जुसपीडित भर्ना भएका छन् । जमराको जुसले सबै रोग निको पार्छ र यसको साइड इफेक्ट छैन भनेर प्रचार गर्नेलाई केही त गर्नैपर्ने भयो । नत्र थुप्रै बिरामी ‘सहिद’ हुनेवाला छन् ।’
त्यसो त, ब्रायन र आना क्लिमेन्टले जमराको जुसमा पाइने क्लोरोफिलले कलेजो रोग निवारण गर्ने कुरा पनि आफ्नो अनुसन्धानमा लेखेका छन् । तर, केसी त्यसलाई मान्न तयार छैनन् । रक्सीले असर पारेको कलेजो ‘डिटक्सिफाई’ गर्न पनि उक्त जुसले सहयोग गर्ने बताइन्छ । त्यसको ठीक विपरीत मान्यता राख्छन् केसी ।
‘औषधी होइन’डा सुधांशु केसी वरिष्ठ कलेजो रोग विशेषज्ञ स्वस्थ मानिसले जमराको जुस खाँदा केही फरक पर्दैन । तर, रोग लागिसकेकाले नखाएकै राम्रो । नेपालमा केही कुरा पनि बुझेर गर्ने बानी छैन । एकचोटि केही लहर आउँछ, सबै त्यसकै पछि लाग्छन् । वैज्ञानिक कारण खोजौँ भन्ने प्रवृत्ति कसैको छैन । त्यसैले कहिलेकाहीँ दु:ख पाइन्छ । भन्नेले भन्छन्, तर जमराको जुसमा क्यान्सर निको पार्ने क्षमता छैन ।
सबै प्राकृतिक तत्त्व औषधी नै हुन् भन्ने छैन । कलेजोका रोगीका लागि त जमराको जुस विष नै हो । गत साता मात्रै जमराको जुस खाएर बिरामी भएका दुई बिरामी वीर अस्पतालमा भर्ना भए । एक जना समयमै डिस्चार्ज भए भने अर्कालाई नर्भिक अस्पतालमा सारियो । हालसम्म २०–२५ जना यस्ता बिरामी आइसकेका छन् । कलेजो सिरोसिसका बिरामीले ‘अर्गानिक’ भनेर खाएको जमराको जुस अभिशाप प्रमाणित भएका घटना हाम्रै आँखाअगाडि छन् । तर, हामीले कहिले महसुस गर्ने ? जुसका फाइदैफाइदा छन् भन्दा सबैले पत्याए । मैले बेफाइदाबारे ट्वीट गर्दा धेरैले पत्याएनन् । उल्टै ममाथि खनिए । मैले खाँदै नखानुस् पनि भनेको होइन । रोग लागिसकेको छ भनेचाहिँ नखानुस् भनेको हुँ ।
एजेन्सी – प्रियंका चोपडा बलिउडकी मोस्ट वान्टेड नायिका हुन् । उनीसँग काम गर्न निर्मात्रा निर्देशकहरु वर्षौ लाइनमा बस्ने गरेका छन् । पूर्व विश्वसुन्दरीको ताज समेत पहिरिएकी यि सुन्दरीले २० वर्षको उमेरमा साउथ फिल्म थामिजानबाट आफ्नो अभिनय यात्रा सुरु गरेदेखि नै कहिल्यै पछि फर्केर हेर्नु परेन । भारतीय अनलाइन भाष्कर दैनिकका अनुसार हाल प्रियंकाको सम्पती २९ मिलियन डलर रहेको छ । उनको वार्षिक आम्दानी ११ मिलियन डलर रहेको छ ।
५ वटा लक्जरीयस कारमा पालैपालो सवार गर्ने यि सुन्दरीका अमेरिका र भारतमा गरेर करोडौँ मूल्य बराबरका ७ वटा घर छन् । जसमध्ये उनका अमेरिकाको म्यानह्याटेनमा भब्य अपार्टमेन्ट किनेकी छिन् । उनका भारतका विभिन्न स्थानमा ६ वटा करोडौँ मूल्य बराबरका घर रहेका छन् । फेसन,बर्फी ,मेरिकोम जस्ता सफल फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी प्रियंका अहिले हलिउडको एक टिभी सिरियलमा अभिनय गरिरहेकी छन् ।
विवाहपछि अबपनि स्क्रिनमा चुम्बन गर्नुहुन्छ ? दीपिकाले जवाफ दिदा सबै चकित ः आखिर के भनिन् त दीपिकाले
माता दक्षिणकाली माताकाे दर्शन गरी पौष २१ गते आइतबारको राशिफल पढौ, भेटी स्वरुप एक सेयर गरौं